DPA Microphones သည်အမျိုးသမီးများအကြိုက်ဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » DPA မိုက်ခရိုဖုန်းတစ်ခုအမျိုးသမီးရိုးရာအကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်
LONGMONT, CO, နိုဝငျဘာ 30, 2015 - အမျှ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း လူကြိုက်များအတွက်ကြီးထွားဖို့ဆက်လက်မတူညီတေးသီချင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးအနုပညာရှင်တွေတိုးအသိပေးစာယူပြီးနေကြသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် DPA နိူးများထဲတွင်အများအပြားအမျိုးသမီးရိုးရာအနုပညာရှင်တွေများမှာ - Olivia Chaney, Aoife O'Donovan နှင့်အဖြစ်လူသိများညီအစ်မတွေရဲ့တီးဝိုင်း SHEL။ တိုက်ရိုက်လွှဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်ဤအနုပညာရှင်အပေါငျးတို့သ MICS တိကျစွာသူတို့၏တူရိယာများ၏အသံနှင့် / သို့မဟုတ်အသံဖော်ကျူးကြောင်းသဘောတူ, DPA ရဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း၏သဘာဝအသံတစ်ခုလေးမွတျမျှဝေပါ။
တစ်ဦးကအဆိုတော်နဲ့ multi-ပြဌာန်းမှု, Chaney လန်ဒန်အခြေစိုက်ထားတဲ့ဆုရ Tour ဂီတပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Chaney ရဲ့ထူးခြားတဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးဖြေရှင်းရန်, သူမ၏ခရီးစဉ်မန်နေဂျာနှင့် FOH အင်ဂျင်နီယာချုပ်တွမ်Dubéအကောင်းဆုံးသူမ၏အသံကမီးမောင်းထိုးပြ DPA MICS အမျိုးမျိုးရွေးချယ်ထားကြသည်။ ဒါကလည်းပါဝင်သည် ဃ: စစ်မှန်သော™ဆိုသံ, ဃ: 4099 စာရွက်စာတမ်း™မဲ နှင့် ဃ: screet ™ 4061 အသေးစားမိုက်ခရိုဖုန်းသူဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ clients များအတွက်အသုံးပြုမယ့်အရာ။
"ဟုအဆိုပါ omnidirectional ဃရာ၏အသံ: screet ™ 4061 condenser မိုက်သေး, နွေးပွင့်လင်းတိကျတဲ့ဖြစ်ပြီး, စန္ဒရားအတွက် mounting သံလိုက်၏သာလွန်အကောင်းဆုံးနေရာချထားဘို့ခွင့်ပြု," Dubéရှင်းပြသည်။ "ဟုအဆိုပါဃရှိခြင်းမတိုင်မီက: screet ™ 4061 MICS, ငါ့စန္ဒရား Mike အများစုအလွဲအချော်တိပ်အတွက်ပါဝင်သည်သည့် MICS ထားရှိခဲ့ကြသည်သော '' cradles '' ။ Proximity အကျိုးသက်ရောက်မှုစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်အဖြစ်ခြုံငုံပစ်ကပ်ပုံစံဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ DPA နှင့်အတူထက်ပိုကောင်းတဲ့အသံကစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင်မိုက်ရပ်တည်ချက်နဲ့မြင်နိုင် MICS နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးများဖျက်သိမ်းရေးအတွက်အယူခံဝင်ဖို့ကဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါဃ: တယောနှင့်ဃအဘို့အမဲ™ 4099V: စစ်မှန်သော™ဆိုသံမိုက္ကရိုဖုန်းအဖြစ်ကောင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကူးရှိပါတယ် "။
O'Donovan ဇန်နဝါရီလ 22, 2016 အပေါ် "ဟုကို Magic နာရီမှာတော့" သူမ၏ sophomore တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိမည်ဖြစ်သည်။ Tucker Martine (အဆိုပါ Decemberists, Neko ဖြစ်ရပ်မှန်) ကနေထုတ်လုပ်သည် 10-သီချင်းအယ်လ်ဘမ်သေး gauzy နှင့်အတူရောနှောအဆိုတော်ရဲ့ပျားရည်အသံ, frictionless အသံနှင့်ပြည့်ဝ၏သူမ၏အများဆုံးအတှငျးအားထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် Sara Watkins နဲ့စာရာ Jarosz အတူ super-အုပ်စုတစ်စုရိုးရာသုံးအဖြစ်ဖျော်ဖြေခရီးစဉ်အပေါ်လက်ရှိ ငါသူမရဲ့အတူပေါ့။ သူမသည် "ဆိတ်ကောင်ဘွိုင်ပွဲ Sessions" ပေါ်တွင်တစ်ဦးအထူးအသားပေးအဆိုတော်ခဲ့ Yo-Yo Ma, Stuart Duncan က, Edgar Meyer နဲ့ Chris Thile အားဖြင့်ဂရမ်မီဆုရှင်အယ်လ်ဘမ်နှင့်အပေါ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပွဲဖန်ဆင်းတော်မူပြီ တစ်ဦးက Prairie Home ကိုအဖော်။ သူမ၏ခါးပတ်အောက်မှာဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများနှင့်အတူ O'Donovan လမ်းအပေါ်သူမ၏အချိန်အများကြီးသုံးစွဲနှင့်သူမ၏လေးလံသောခရီးသွားအချိန်ဇယား၏ကွံပကိုဆီးတားနိုင်မယ့်ဂစ်တာမိုက်ခရိုဖုန်းကိုရှာဖွေနေသွားလေ၏။ သူမသည်ဃနှင့်အတူဤတွေ့ရှိခဲ့: သူမရဲ့ 4099 မာတင်ဂစ်တာနှင့်အတူအသုံးပြု 1934G စာရွက်စာတမ်းမိုက္ကရိုဖုန်း, ™မဲ။
"DPA ငါ့ဂစ်တာရဲ့နွေးထွေးမှုကိုဖမ်းယူဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဝေးနေဖြင့်ရှင်းလင်းအများစုကိုက်ညီသေံ, ရှိပါတယ်" ဟုသူမကဆိုသည်။ "တစ်ကလစ်-on ကိုမိုက်ကရိုဖုန်းနှင့်အတူ, သငျသညျအခွင့်အလမ်းမှတက်ဘာမှထွက်ခွာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်မအာရုံပြံ့လှငျ့ရ, ဒါမှမဟုတ်ငါပြန်နှင့်ထွက်ခြေလှမ်းလျှင်, တကတသမတ်တည်းလမ်းအတွက်အသံဖမ်းယူနေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်. ဒီလက်ရှိခရီးစဉ်တွင် DPA MICS ကြီးမြတ်ခဲ့ကြပြီ။ ကျနော်တို့ကယ့်ကိုအားလုံးခြားနားချက်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီဖြစ်သောဇာတ်စင်ပေါ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနီးစပ်သူရနိုင်, အခွင့်အလမ်းမှတက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံအရည်အသွေးကိုထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲ။ "
မကြာသေးမီကဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆေးရုံကလပ်မှာ "Residence အတွက်အဆိုတော်များ" အဖြစ် featured SHEL ကော်လိုရာဒိုကနေညီအစ်မတစ်တီးဝိုင်း (ဆာရာ, ဟန္န, အီဗာနှင့်လီဇာ Holbrooke) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနေထိုင်စဉ်အတွင်းအုပ်စုဟာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတည်ခင်းဧည်နှင့်ရင်းနှီးဟန်ပြလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ SHEL လည်းမကြာသေးမီကသူတို့ရဲ့သီချင်း "သင် My Baby Be နိုင်သလား" ၏တိုက်ရိုက်, One-ယူသောဗီဒီယိုဖြန့်ချိ အဆိုပါ Huffington Post။ သီချင်းကထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်းတီးဝိုင်းရဲ့လာမည့် sophomore လွှတ်ပေးရန်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် Dave Stewart က, ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူ အဆိုပါ Eurythmics။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့တူရိယာအဘို့အ 4099 စာရွက်စာတမ်း™မဲ: အဃအတူစစ်မှန်သော™ဆိုသံမိုက်ခရိုဖုန်း: အယ်လ်ဘမ်နှင့်တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်, အုပ်စု DPA ရဲ့ဃပေါ်တွင်မူတည်သည်။
"ကျနော်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အသံအရည်အသွေးနှင့်လွယ်ကူခြင်းမှအဓိကအားကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာ DPA MICS သုံးပြီးပြီ," ဟန္န Holbrooke ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကတစ်ခုတည်းဃနဲ့စတင်: စာရာ၏တယောအဘို့အမဲ™ 4099V နှင့်နောက်ဆုံးတွင်မိုက်ခရိုဖုန်း '' ဘက်စုံမှပြောသောအရာ, ငါတို့တူရိယာအားလုံးအတှကျအသုံးပွုဖို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ဒါဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကအခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ်သညျ လာ. ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံတွေကိုပေးသောရှင်းလင်းပြတ်သားနှင့်သဘာဝသံကိုခစျြတျောမူသောအခါအစစ်မှန်သော™ဆိုသံမိုက္ကရိုဖုန်း: ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဃသုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးဖျော်ဖြေအနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက်မူထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့အနာဂတ်မှာဖွံ့ဖြိုးသောအရာကိုငါတို့သည်ဤအချိန်တလျှောက်လုံး DPA မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူတစ်အံ့သြဖွယ်ကြားဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပါပြီ, ကြှနျုပျတို့ကိုမြင်လျှင် (နှင့်ကြားနာ) မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ DPA မိုက်ကရိုဖုန်း isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-11-30
ယခင်: trilogy ပာအရောင်းရောက်ရှိခြင်းတိုးချဲ့
နောက်တစ်ခု: Zylight Newz တွင်-ကင်မရာအလင်းအခုတော့သင်္ဘော